သင်ရယ်မောဖို့ မမေ့ပါနဲ့ - SANTHITSA
ရယ်မော ခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ တောင့်တင်း နေတဲ့ ကြွက် သား တွေကို ပြေလျော့ စေနိုင်ပါတယ် ။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ကျွန်ုပ် တို့တွေ နေ့စဉ် လူမှု ဘဝမှာ အမော များစွာနဲ့ နဘမ်းလုံး နေကြ ရတာမဟုတ်လား ။
စိတ်ဖိစီးခြင်း ပူပန်ခြင်း သောက တွေများ အကြားမှာ မရယ်နိုင် မပြုံးနိုင် ဖြစ်နေ ကြရတယ်
မဟုတ် ပါလား ။ ဒါကြောင့်မို့ သင် ရယ်မော နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ ရယ်ခြင်း ဟာ စိတ် ဖိစီးမှု ဖြစ်စေတဲ့ဟော်မုန်း တွေကို လျှော့နည်း စေပြီး ကိုယ်ခံ စွမ်းအားတွေ မြင့်တက် စေနိုင်မှာပဲ ဖြစ်တယ်လို့သုတေသီ များက ဆိုကြ ပါတယ် ။
ရယ်မော ခြင်းကြောင့် စိတ်ခံစားမှု ကောင်းမွန် စေတဲ့ အင်ဒိုဖင် ဟော်မုန်း ကိုလည်း ထွက်လာ စေနိုင်တယ်လို့ ဆိုထား ပါတယ် ။ သွေးကြော အတွင်း သွေးလည် ပတ်မှု ကောင်းစေပြီး သွေးကြောတွေရဲ့ လုပ်ငန်း ဆောင်တာကို အကူအညီ ဖြစ်စေ ပါတယ် ။
အဲ့ဒီ့ အတွက်ကြောင့် နှလုံးကို တိုက်ခိုက် ခံရတာမျိုး မဖြစ်ပေါ် စေပဲ နှလုံးကို ကျန်းမာစေပါတယ် ။ တစ်နေ့ကို ဆယ်မိနစ် ဆယ့်ငါးမိနစ် ခန့် လောက် ရယ်တဲ့ သူတွေဟာ ကယ်လိုရီ လေးဆယ်လျော့ကျ စေတယ် လို့ လည်းသုတေသီ တွေက ဆိုထား ပါတယ် ။
ရယ်မော ပျော်ရွှင်စွာနေတဲ့ သူတွေ အတွက်က ဝိတ်တက် လာစရာ အကြောင်း မရှိပါ ။ ဝိတ်ချ လိုသူတွေ ဆိုရင်လည်း ရယ်မော ပျော်ရွှင်ခြင်း အားဖြင့် အစားအသောက် ရှောင်စရာ မလိုပဲ တစ်နှစ်ကို သုံးလေးပေါင် လောက် ကျသွား စေနိုင် ပါတယ်လို့ ဆိုထား ပါတယ် ။
ဒါတင် မဟုတ်သေးပါ ရယ်မော ပျော်ရွှင်စွာ နေတတ် သူတွေဟာ အသက် ပိုရှည် စေတတ်ကြောင်းကို သုတေသန ပြုသူ တွေက လေ့လာ တွေ့ရှိ ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
မိတ်ဆွေတို့ ရယ်မော ခြင်းဟာ အထူး ရှာဖွေ ဝယ်ယူ စရာ မလိုတဲ့ ကျန်းမာရေး ဓာတ်စာ ဖြစ်တာမို့ ရယ်မောခြင်းကို ဂရုစိုက် ပြုလုပ် လိုက်ကြ ပါစို့ …. ။
ရယျမော ခွငျးဟာ ခန်ဓာကိုယျမှာ တောငျ့တငျး နတေဲ့ ကွှကျ သား တှကေို ပွလြေော့ စနေိုငျပါတယျ ။ တဈနေ့ တဈနေ့ ကြှနျုပျ တို့တှေ နစေ့ဉျ လူမှု ဘဝမှာ အမော မြားစှာနဲ့ နဘမျးလုံး နကွေ ရတာမဟုတျလား ။
စိတျဖိစီးခွငျး ပူပနျခွငျး သောက တှမြေား အကွားမှာ မရယျနိုငျ မပွုံးနိုငျ ဖွဈနေ ကွရတယျ
မဟုတျ ပါလား ။ ဒါကွောငျ့မို့ သငျ ရယျမော နိုငျဖို့ ကွိုးစားပါ ရယျခွငျး ဟာ စိတျ ဖိစီးမှု ဖွဈစတေဲ့ဟျောမုနျး တှကေို လြှော့နညျး စပွေီး ကိုယျခံ စှမျးအားတှေ မွငျ့တကျ စနေိုငျမှာပဲ ဖွဈတယျလို့သုတသေီ မြားက ဆိုကွ ပါတယျ ။
ရယျမော ခွငျးကွောငျ့ စိတျခံစားမှု ကောငျးမှနျ စတေဲ့ အငျဒိုဖငျ ဟျောမုနျး ကိုလညျး ထှကျလာ စနေိုငျတယျလို့ ဆိုထား ပါတယျ ။ သှေးကွော အတှငျး သှေးလညျ ပတျမှု ကောငျးစပွေီး သှေးကွောတှရေဲ့ လုပျငနျး ဆောငျတာကို အကူအညီ ဖွဈစေ ပါတယျ ။
အဲ့ဒီ့ အတှကျကွောငျ့ နှလုံးကို တိုကျခိုကျ ခံရတာမြိုး မဖွဈပျေါ စပေဲ နှလုံးကို ကနျြးမာစပေါတယျ ။ တဈနကေို့ ဆယျမိနဈ ဆယျ့ငါးမိနဈ ခနျ့ လောကျ ရယျတဲ့ သူတှဟော ကယျလိုရီ လေးဆယျလြော့ကြ စတေယျ လို့ လညျးသုတသေီ တှကေ ဆိုထား ပါတယျ ။
ရယျမော ပြျောရှငျစှာနတေဲ့ သူတှေ အတှကျက ဝိတျတကျ လာစရာ အကွောငျး မရှိပါ ။ ဝိတျခြ လိုသူတှေ ဆိုရငျလညျး ရယျမော ပြျောရှငျခွငျး အားဖွငျ့ အစားအသောကျ ရှောငျစရာ မလိုပဲ တဈနှဈကို သုံးလေးပေါငျ လောကျ ကသြှား စနေိုငျ ပါတယျလို့ ဆိုထား ပါတယျ ။
ဒါတငျ မဟုတျသေးပါ ရယျမော ပြျောရှငျစှာ နတေတျ သူတှဟော အသကျ ပိုရှညျ စတေတျကွောငျးကို သုတသေန ပွုသူ တှကေ လလေ့ာ တှရှေိ့ ခဲ့ကွ ပါတယျ ။
မိတျဆှတေို့ ရယျမော ခွငျးဟာ အထူး ရှာဖှေ ဝယျယူ စရာ မလိုတဲ့ ကနျြးမာရေး ဓာတျစာ ဖွဈတာမို့ ရယျမောခွငျးကို ဂရုစိုကျ ပွုလုပျ လိုကျကွ ပါစို့ …. ။
This Month : 4640
This Year : 68310
Total Visit : 142781
Total Hits : 2076700